Salamo 68 Ny Hafatra Hafatra Amin'ny Andininy | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Salamo 68 Ilay Andininy Hafatra amin'ny andininy
Salamo 68 Ilay Andininy Hafatra amin'ny andininy
Amin'ny fandalinana anio ny salamo, dia hojerentsika ny Salamo 68 ny andininy ao amin'ny andalana. Ny Salamo 68 ny hafatry ny andininy amin'ny andalan-tsoratra dia ankamaroan'ny hira fiderana an'Andriamanitra. Nosoratan'ny mpanao salamo io mba hanaiky ny herin'andriamanitra; ny fahefana lehibe ananany amin'ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra. Famandrihana izany izay hahatonga ny olon-drehetra hankasitraka ny halehiben'ny heriny ary koa ny hampangovitra ny lehilahy mirehareha sy mirehareha. Hita ho feon'ny mandresy ny fahavalon'Andriamanitra. Mihevitra ny manam-pahaizana momba ny Baiboly fa ny salamo dia nosoratan'i David tamin'ny fotoana namerenana ny fiaran'ny fanekena tany amin'ny tanin'ny Isiraely.
Antso ho an Andriamanitra koa ny Salamo 68 mba hanehoany ny heriny amin'ny fahavalony. Hitantsika izany ao amin'ireo andininy roa voalohany amin'ny andalan-tsoratra masina. Ny mpanao salamo dia nahatakatra fa mahery Andriamanitra ary noho izany manambara ny fiderana azy. Amin'izany fahalalana izany no aniriany ny hanehoan'Andriamanitra ny heriny amin'ireo mitady hanandratra ny tenany ho amboniny. Rehefa mandalo isaky ny andiany ao amin'ny salamo isika, dia hanomboka hahita sy hahatakatra ny halehiben'Andriamanitsika ary koa mahatakatra ny fitiavany ny olony.
PSALO 68 FAHASOAVANA VERSE BY VERSE.
Andininy 1 sy 2: Aoka hitsangana Andriamanitra, ka hiely ny fahavalony; ary izay mankahala azy handositra ny tavany. Tahaka ny setroka dia esory izy: tahaka ny savoka mihelina eo alohan'ny afo, dia aoka ho ringana ny ratsy fanahy eo anatrehan'Andriamanitra.
Ity dia antso ho an'Andriamanitra haneho ny heriny amin'ny fahavalony. Tiany ho levona toy ny savoka eo anatrehan'Andriamanitra izy ireo ary ho ringana. Ny fahavalon'Andriamanitra dia izay rehetra manohitra ny teniny sy izay manohitra ny olony. Hitantsika miharihary izany eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha mpino antsika, ny fahavalontsika- Ny fahavalon'Andriamanitra dia mitady andro aman'alina handrava ny fiainantsika. Izany no antony ilàn'Andriamanitra hitsangana hisolo antsika ary handringana azy ireo.
Andininy 3 & 4: Fa ny marina mifaly; Aoka ho ravoravo eo anatrehan'Andriamanitra izy. Mihirà ho an'Andriamanitra, mankalazà ny anarany: manandrata izay mitaingina ny lanitra amin'ny anarany JAH ary mifaly eo anatrehany..
Mifanohitra amin'izay hataon'Andriamanitra amin'ny fahavalony, ny mpanao salamo dia mangataka amin'Andriamanitra mba hameno izay rehetra mahitsy. Tiany hampifaly ny Tompo izy, midera azy ary manandratra azy ho Jehovah.
Andininy 5 sy 6: Rain'ny kamboty sy mpitsara ny mpitondratena, dia Andriamanitra ao amin'ny fonenany masina. Napetrak'Andriamanitra ao an-trano ny mpitovo: mamoaka ny mifatotra ho an'ny gadra izy; fa ny maditra kosa dia mitoetra any amin'ny tany karankaina.
Eto Andriamanitra dia ekena ho raim-pianakaviana sy kambohin'ny mpitondratena. Izy no manome ireo olona tsy manana fianakaviana fianakaviana hiantso azy ireo. Omeny fahafahana ny ao am-ponja, fa ireo mikomy aminy kosa hiteraka tsy fahatomombanana lehibe.
Andininy 7 sy 8: Andriamanitra ô, fony ianao nivoaka teo alohan'ny olonao, raha nandeha namaky ny efitra ianao; selah: Nihorohoro ny tany, ny lanitra koa dia nilatsaka teo anatrehan'Andriamanitra: na i Sinia aza dia nihetsiketsika teo anatrehan'Andriamanitra, Andriamanitry ny Isiraely.
Eto dia nitantara ny fomba nitondran'Andriamanitra ny olony hiala tany an-tany efitra ny mpanao salamo. Andri-rahona ho azy ireo andro aman'alina sy andry afo nony alina. Nihorohoro ny lanitra sy ny tany na dia nitarika ny zanany ho any amin'ny toerana nampanantenainy aza izy.
Andininy 9 sy 10: Ianao Andriamanitra dia nandatsaka ranonorana be, izay nampiorina ny lovanao, raha reraka. Ny fiangonanao no nitoetra tao: Andriamanitra ô, efa nanomana ny soao ho an'ny ory ianao.
Mba hanaporofoana fa nomeny ny lova ho azy ireo ny tany, dia nandatsaka ranonorana be loatra teo amin'ny tany Andriamanitra mba hahavokatra azy. Dia nitso-drano azy ireo tamin'ny fahatsarany izy, tany tondra-dronono sy tantely no namboariny, ary namponeniny ny zanany.
Andininy 11 & 12: Ny tompo no nanome ny teny: lehibe ny fiarahan'ireo namoaka azy. Nandositra ny mpanjaka ny tafika, ary nijanona tao an-trano ilay vehivavy nijanona.
Andriamanitra dia nialoha azy ireo niteny sy nanamafy ny teniny tamin'izy ireo. Samy nanambara izany rehetra izany tamin'ny olona rehetra ny lehilahy sy ny vehivavy. Avy eo dia nanomboka niady hamely azy ireo ny fanjakany sy ny fanjakany, fa Andriamanitra kosa nitsangana nanohitra azy ireo dia nandositra izy ireo, namela ny fananany ho an'ny vehivavy zion.
Andininy 13 & 14:Na dia nandry teo am-bilany aza ianao, dia ho tonga tahaka ny elatry ny voromailala mitafy volafotsy, ary ny volony amin'ny volamena mavo. Raha miparitaka ireo mpanjaka mahery indrindra dia fotsy toy ny oram-panala ao Salmon.
Ny mpanao salamo dia mamaritra ny zanak’Israely ho toy ny ondry andiany toa tsy dia zava-dehibe. Andriamanitra kosa dia mampiasa ny elany mba handrakofana sy hiarovana azy ireo amin'ny fahalemen-tenany. Nifidy mpanjaka ho azy izy ary nandoko azy ireo nanao azy ho fotsy tahaka ny oram-panala.
Andininy 15 & 16: Ny havoan'Andriamanitra dia tahaka ny havoan'i Basana; havoana avo tahaka ny havoan'i Basana. Nahoana no mitsambikina ianareo, ry havoana avo? Io no havoana tian'Andriamanitra hitoerany; eny, honina ao mandrakizay ny Tompo.
Ny havoana any Basana, araka ny tantara, dia tendrombohitra lehibe, raha tendrombohitra any an-tendrombohitra Andriamanitra. Saingy hitantsika eto io tendrombohitra io ihany mba tsy hitsambikina satria Andriamanitra nifidy iray hafa. Izany dia mamaritra ny safidin'Andriamanitra an'i Ziona ho an'ny hafa, ny olony amin'ny firenena hafa. Na dia mety hialona aza ny hafa, tsy manova ny zava-misy fa nifidy an'i Ziona Andriamanitra ho azy ireo Andriamanitra.
Andininy 17 & 18: Ny kalesin'Andriamanitra dia roa alina; Anjely an'arivony; ny Tompo dia ao aminy, sahala amin'ny Sinay ao amin'ny fitoerana masina. Efa niakatra ho any ambony ianao ka nitondra babo; nahazo fanomezana ho an'ny olona ianao; eny, ho an'ny mpikomy koa, mba hitoeran'ny Tompo Andriamanitra eo aminy.
Io koa dia miresaka momba ny hamaroan'ny olon'Andriamanitra, ny heriny sy ny fipetrahan'Andriamanitra eo aminy. Andriamanitra dia nanao fandaharana mba hananan'izy ireo azy amin'ny fahafenoany ary nomeny fanomezana avy amin'izy ireo izy. Ny andininy faharoa dia miresaka momba ny asa hataon'i Kristy rehefa maty koa izy. Ahoana no hiakarany any an-danitra aorian'ny fahafatesany, handray fanomezana ara-panahy ho an'ny olona; na ireo izay marina na ireo izay mpikomy.
Andininy 19 & 20: Isaorana anie ny tompo, Izay mitondra soa ho antsika isan'andro, eny, Andriamanitry ny famonjena antsika. Izy no Andriamanitsika dia Andriamanitry ny famonjena; ary mandra-pahatongan'Andriamanitra Andriamanitra tompoko dia ny olan'ny fahafatesana.
Midera an’Andriamanitra indray ny mpanao salamo. Midera azy izy noho ny soa asehony amintsika isan'andro. Nidera azy izy noho ny fomba fanavotany antsika na dia amin'ny tanan'ny fahafatesana aza.
Andininy 21 & 22: Fa Andriamanitra kosa handratra ny lohan'ny fahavalony, ary ny loha volo kosa an'izay mandroso amin'ny fahadisoany. Hoy ny Tompo: Hampody avy any Basana aho, hampody ny oloko avy any amin'ny ranomasina lalina aho.
Tsy mamonjy antsika fotsiny Andriamanitra fa manorotoro ny lohan'ny fahavalontsika indrindra fa ireo izay tsy mety mibebaka. Hiantso azy ireo hivoaka ny toerana fiereny izy ary hiantoka ny fandringanana azy rehetra. Ary hiantso ny olony izy ka hamerina azy ireo hatrany amin'ny faran'ny ranomasina.
Andininy 23 sy 24: Mba hatsoboky ny ran'ny fahavalonao ny tongotrao, ary ny lelan'ny alikanao ao. Ireo dia nahita ny fandehananao, Andriamanitra ô, dia ny fandehanan'Andriamanitro, Mpanjakako, ao amin'ny fitoerana masina.
Hataon'Andriamanitra izay hotapahina ao ambanin'ny tongotsika ny lohan'ny fahavalontsika ka 'ho difoboka amin'ny rà' ny tongotsika. Ary aorian'ny fandreseny azy ireo, dia handroso eo alohan'izy ireo Andriamanitra. Io dia miresaka ny fiverenan'ny fiaran'ny fanekena hiverina any Isiraely. Misolo tena ny tempoly ny sambofiara ary tao Andriamanitra, naverin'izy ireo tamim-boninahitra tamin'ny toerana nitana azy io taloha.
Andininy 25 & 26: Ny mpihira taloha nandeha, ny mpilalao nitendry zavamaneno; Anisan'ireny ny tovovavy milalao amin'ny ampongatapaka. Misaora an'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana, eny, ny Tompo, avy amin'ny loharanon'i Isiraelyl.
Rehefa nifindra niaraka tamin'ny sambofiara izy ireo dia nihira fiderana an'Andriamanitra ary nitendry zavamaneno niaraka taminy. Ny sambofiara dia porofo fa momba azy ireo Andriamanitra ary very izany dia olana kely amin'izy ireo. Nefa rehefa tafaverina izy ireo dia faly satria efa naverina tamin'izy ireo indray ny fisian'Andriamanitra.
Andininy 27 & 28: Indreo misy Benjamina kely misy ny mpanapaka azy, ny mpanapaka ny Joda sy ny filankevitra ananany, ny andrianan'ny Zebolona ary ny mpanapaka ny Naftaly. Andriamanitrao efa nandidy ny herinao; ampaherezo, Andriamanitra ô, izay nataony ho anay.
Izany no filaharana ny fanazarana mandritra ny diany mandeha amin'ny sambo-fiara. I Benjamina kosa, izay faralahy nefa nankasitrahan'Andriamanitra dia nitarika ny lalana. Ary Jodà, Zebolona ary Naftaly. Ny andininy manaraka dia fiantsoan'Andriamanitra mba hanehoany ny heriny amin'ireo olona tahaka ny nataony taloha. Ny hery izay nomeny azy dia nandresy ary namelona azy ireo.
Andininy 29 sy 30: Noho ny tempolinao any Jerosalema dia hanatitra fanomezana ho anao ny mpanjaka. Anaro ny miaramilan'ny lefona, ny maro, ary ny zanak'omby, raha ny vahoaka, mandra-pankafany volafotsy ny olona rehetra, aelezo ny olona tia ady.
Hanatitra fanomezana ho an'ny tempoliny any Jerosalema ny mpanjaka, mpanjaka avy amin'ny faritra rehetra. Izay rehetra manandratra ny tenany ho ambony noho Andriamanitra sy izay tia vola dia manao ny tenany ho tahaka an'Andriamanitra dia hohenjehiny.
Andininy 31 & 32: Hisy mpanapaka avy any Egypta; Etiopia hananty tanana amin'Andriamanitra. Mihirà ho an'Andriamanitra amin'ny fanjakan'ny tany; Mankalazà an'ny Tompo; Selah.
Noho ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra, dia ho avy hiankohoka eo anatrehan'ny fanekena sy fanekena an'Andriamanitra ny fanjakana avy amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao. Miantso antsika indray mandeha indray ny mpanao salamo hidera an’Andriamanitra. Ny fanjakana tsirairay, ny firenena rehetra dia tokony hidera azy amin'ny herin'ny heriny.
Andininy 33 sy 34: Izay mitaingina ny lanitry ny lanitra izay hatramin'ny taloha; indro izy mamoaka ny feony sy ilay feo mahery. Ekeo ho an'Andriamanitra ny hery; ambonin'ny Isiraely ny fahalehibiazany ary ny heriny dia any amin'ny rahona.
Fiantsoana hiderana indray. Miantso ny rehetra hidera an'Andriamanitra noho ny heriny sy ny heriny ny mpanao salamo. Izay mitoetra any an-danitra sy ny feony mampihozongozona hatrany amin'ny faran'ny tany. Andriamanitry ny fireneny; Iaveh Andriamanitra ny Israely.
Andininy 35: Andriamanitra ô, mahatahotra avy amin'ny fitoerana masina ianao; Andriamanitry ny Isiraely no manome hery sy hery amin'ny olony. Isaorana anie Andriamanitra.
Miderà an'Andriamanitra izay ny fahatongavany fotsiny dia mampihorohoro sy matahotra an'Andriamanitra. Ilay manatanjaka ny vahoakany amin'ny heriny sy ny heriny lehibe.
NOHO IZAO DIA TOKO VE IZANY TOKO FOANA IZANY?
Ireto misy toe-javatra vitsivitsy tokony hampiasanao an'io salamo io.
Rehefa irinao Andriamanitra hitsangana hamaly faty an'ireo fahavalony; ny olan'ny fiainanao.
Rehefa mila mankasitraka an'Andriamanitra noho ny heriny sy ny fahefany amin'ny fiainanao ianao.
Rehefa maniry Andriamanitra hanome anao fandresena ny fahavalonao.
Rehefa te hilaza ny rehetra izay ananan'Andriamanitra ho anao ianao sy ireo olony taloha.
SALAMO 68 FIVAVAHANA.
Tompo ô, mitsangàna araka ny teninao ary avelao ny fahavalonao rehetra: miparitaka amin'ny anaran'i Jesosy ny fahavalon'ny aiko rehetra.
Dada ô, mangataka aminao aho fa omeo fandresena amin'ny fahavaloko aho, avelao ho potipotehina eo ambanin'ny tongotro izy ireo ary ny rany ao ambanin'ny tongotro.
Tompo ô, misaotra anao aho tamin'ny fomba namerenanao ny fahatongavanao tamin'ny olonao taloha ary ny fomba nihirany teo anoloanao, dia misaotra anao fa mbola Andriamanitra ianao ary hanao toy izany amin'ny anarako ao amin'i Jesosy.
Toy ny setroka entina hiala ary miempo eo anatrehan'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia avelao koa ny fahavaloko hiempo eo alohako amin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra mamerina amin'ny laoniny ny voninahitro, amin'ny anaran'i Jesosy.
Tahaka ny haizin'ny haizina alohan'ny fahazavana, ry Tompo, avelao hialana eto anatrehako ny olako rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ianao no herin'Andriamanitra, tapaho ny olana rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
Andriamanitra ô, mitsangàna ary ario ny tsy ampy rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny herin'ny fahafahana sy ny fahamendrehana, aseho amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny toko rehetra momba ny alahelo sy fanandevozana amin'ny fiainako, akaiky mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry herin 'Andriamanitra, esory hiala amin'ny fantsom-baraka aho amin'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny sakana rehetra eo amin'ny fiainako dia manome fahagagana, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fahasosorana rehetra eo amin'ny fiainako dia lasa tetezana ho an'ireo fahagagana, amin'ny anaran'i Jesosy.
Fahavalo rehetra, mandinika paikady manimba manohitra ny fandrosoako eo amin'ny fiainako, ho menatra amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fahazoan-dàlana rehetra hitoerana ho ahy hijanonana ao amin'ny lohasahan'ny faharesena, foanana, amin'ny anaran'i Jesosy.
Maminany aho fa ny fiainana mangidy tsy ho anjarako; ny fiainana tsara kokoa no ho vavolombeloko amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny trano fonenana feno habibiana rehetra, natao hanohitra ny hoaviko, rava, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ny fitsapana rehetra nataoko dia lasa vavahady ho an'ny fampiroboroboako, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry tezitra an'Andriamanitra, soraty ny herin'ny mpampahory rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Tompo, avelao ny fanatrehanao hanomboka tantara malaza amin'ny fiainako.
Previous lahatsoratraNy vavaka dia manondro avy amin'ny Salamo 25
Next lahatsoratraSalamo 3 Vavaka hahazoana fanampiana
20 mivavaka momba ny fitarihana sy paikadin'Andriamanitra
Teboka vavaka mba hamelomana indray ny fanambadiana marary
FIVAVAKANA HO AN'NY MPIASA MAZAVA